9 xeeladood oo ay Kenyaanku adeegsadeen si dib loogu dhigo dacwadda Badda!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada 9 xeeladood oo ay Kenyaanku adeegsadeen si dib loogu dhigo dacwadda Badda!!
9 xeeladood oo ay Kenyaanku adeegsadeen si dib loogu dhigo dacwadda Badda!!
(Hadalsame) 04 Agoosto 2019 – Dowladda Kenya ayaa la timid xeelado kala duwan, oo lagu marin habaabinayo kiiska muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyaga oo geed dheer iyo mid gaaban u koray sidii dib loogu dhigi lahaa dhageysiga dacwada badda.
W/D: Cabdicasiis Axmed Gurbiye, Goobjoog News
Previous articleMadaxwaynaha Nigeria oo tillaabadii 1-aad qaaday si loo xaqiijiyo amaanka dadkiisa lagu gumaadayo South Africa
Next articleMuqdisho shalaydii Hoggaamiye Kooxeedyada & maanta middee LIIDATAA?!!